तपाईलाई थाहा छ, कागती पानी सेवनद्धारा कति फाइदा हुन्छन - Internet Khabar
February 1, 2018 October 1, 2018 Internet Khabar Desk
एक गिलास कागती पानी सेवन गरी आफ्नो दैनिकी सुरुवात गर्छन, पोषणविज्ञ र सेलिब्रेटीहरू । तपाईं पनि कागती पानी सेवनबाट दिन सुरुवात गर्नुहोस् विश्वास नै नलाग्ने १२ परिवर्तन महशुस गर्नुहुनेछ
१. तौल नियन्त्रणमा रहन्छ
डाइटरहरूको सबैभन्दा राम्रो साथी हो कागती पानी । कागतीमा हुने पोलीफेनोल तत्वले भोकलाई नियन्त्रण गर्छ । साथै शरीरमा भएको बोसोबाट नै शरीरमा आवश्यक तत्वको परिपूर्ति गर्छ । साथै तौललाई पनि नियन्त्रणमा राख्छ । खाना खानुअघि एक गिलास कागती पानी सेवन गरे तपार्इंले खाएको खानालाई पचाउन पनि मद्दत गर्छ ।
२. बिरामी हुनबाट जोगाउँछ
भिटामिन सी को बारेमा हामी सबैले सुनेकै छौं । जुन अमिलो फलफुलमा बढी पाइन्छ । भिटामिन सीले मानव शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ । तर, कागती पानी सेवनले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता मात्रै बढाउँदैन संक्रमणबाट पनि जोगाउँछ
३. पाचन तन्त्रलाई बलियो बनाउँछ
कागतीमा हुने एसिडले पाचनतन्त्रलाई सक्रिय बनाउँछ । कागतीमा भएको एसिडले पेटमा भएको खानालाई टुक्राउन मद्दत गर्छ जसले पाचन पक्रिया सहज बन्छ । मनतातो पानीमा कागतीको रस राखेर सेवन गरे वृद्धावस्थामा हुने पाचन सम्बन्धी समस्या हट्ने पोषणविद्हरूको भनाइ छ ।
४. भिटामिन सी भरपुर
अमिलो फलफूलहरू भिटामिन सीको प्रमुख स्रोत हो । यूनाइटेड स्टेड डिपार्टमेन्ट अफ एग्रीकल्चरका अनुसार चौथाइ कप कागतीको रसमा २३ दशमलब ६ मिलिग्राम भिटामिन सी पाइन्छ । भिटामिन सीले मुटुजन्य रोग र क्यान्सरको जोखिमलाई पनि कम गर्छ ।
५. शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुन दिदैन
कागाती पानीले प्रत्यक्ष रुपमा शरीरको पानीको मात्रा त पुरा गर्छ नै साथै यसको स्वादले पानी खाने रुची पनि जगाउँछ । जसले शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुन दिदैन ।
६. जवान राख्न मद्दत गर्छ
कागतीमा पाइने भिटामिन सीले छालालाई सुन्दर र मुलायम मात्रै राख्दैन छाला चाउरिनबाट पनि बचाउँछ । कागतीमा पाइने भिटामिन सीमा छाला चाउरिने पक्रियासँग लड्ने गुण हुन्छ । यसले छालाको रक्षा गर्छ ।
७. कलेजोको काममा मद्दत गर्छ
कागती पानीले कलेजोलाई काम गर्न अझै सक्रिय बनाउँछ । कलेजोले सक्रिय रुपमा काम गरे शरीरका अन्य अंगले पनि आफ्नो भूमिका सक्रिय रुपमा निर्वाह गर्छन ।
८. शरीरमा पोटासियमको मात्रा बढाउँछ
फलफूल मध्ये केरामा मात्रै पोटासियम पाउने हामी विश्वस गर्छौ । तर कागतीमा पनि पोटासियम तत्व भरपुर हुन्छ । पोटासियमले मानव शरीरका कोषलाई सक्रिय मात्रै राख्दैन नसामार्फत हुने विभिन्न संकेतलाई पनि सक्रिय बनाउँछ ।
९. दिनभर ताजा र स्फूर्त राख्छ
हरेक बिहान एक वा दुई गिलास कागती पानी सेवन गर्ने हो भने दिनभर शरीर स्पूmर्त रहने पोषणविद्हरूको भनाइ छ । साथै शरीरका विभिन्न अंग सक्षम हुनासाथै शरीर स्फूर्त हुनु स्वभाविकै हो ।
१०. मिर्गौलामा पत्थरी हुनबाट जोगाउँछ
सामान्यता पानीको कमीका कारण मिर्गाैलामा पत्थरी हुने गर्छ । यदि नियमित कागती पानी सेवन गर्ने हो भने शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुँदैन र मिर्गौलामा हुने पत्थरीको जेखिम स्वत कम हुन्छ । साथै पत्थरी भइसकेकाहरूलाई पनि कागती पानी स्वस्थकर हुन्छ । कागतीमा हुने एसिडले पत्थरीलाई पगाल्न सहयोग गर्छ ।
११. मुख गनाउने समस्याबाट मुक्ति दिन्छ
मुखमा अड्किएको खानाका कारण धेरैजसोको मुख गनाउने गर्छ । यस्ता व्यक्तिले कागती पानी नियमित सेवन गरे मुखमा भएका खानाका टुक्रालाई सफा गर्छ । जसले मुख गानाउँने अथवा श्वास गनाउने समस्याबाट मुक्ति मिल्छ ।
सरकारले घोषणा गरेको ७० प्रकारका निशुल्क औषधि कुन कुन हुन् र कहाँ कहाँ पाइन्छ ?